ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတက္ကသိုလ်မဖြစ်သေးပေမယ့် သိပ္ပံဘာသာရပ်အချို့မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းအချို့ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ် | News and Periodical Enterprise
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတက္ကသိုလ်မဖြစ်သေးပေမယ့် သိပ္ပံဘာသာရပ်အချို့မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းအချို့ဟာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်
Submitted by npe-user on Sun, 11/22/2020 - 09:12
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ခံ ပါမောက္ခ ချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဆရာကြီးဒေါက်တာထွန်းခင်အား တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခဲ့သည်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါ သည်။
မေး ။ ။ ဆရာကြီးရဲ့ မွေးဇာတိ၊ အခြေခံ ပညာသင်ကြားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော့်ဇာတိက ညောင်ဦး မြို့နယ် သဲပြင်တောရွာဖြစ်ပါ
တယ်။ မိဘတွေကတော့ ဦးကံသာနဲ့
ဒေါ်စာတင်ပါ။ ကျွန်တော့်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်
မေလ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် မူလတန်းပညာကို ရွာက
သင်ဆု (Scholarship) စာမေးပွဲတွေကို
၁၉၅၈ ခုနှစ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော် အလယ်တန်းနဲ့ အထက်တန်း
ပညာကို ညောင်ဦးမြို့ အထက်တန်း
ကျောင်းမှာ သင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သတ္တမတန်း
(Scholarship) စာမေးပွဲတွေကို ၁၉၆၁
ခုနှစ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်
ဂုဏ်ထူးနဲ့ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပါ
၁၉၆၄-၆၅ ပညာသင်နှစ်မှာ စခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနှစ်မှာပဲ ကျွန်တော် မကွေးဥပစာ
ကောလိပ်ကို ရူပဗေဒအဓိကနဲ့ ပထမနှစ်
သိပ္ပံတန်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၅-
၆၆ ပညာသင်နှစ် ဒုတိယနှစ်သိပ္ပံတန်း
တက်ရောက်နေစဉ်မှာ တက္ကသိုလ်လူရည် ချွန်အဖြစ် အရွေးခံရပါတယ်။ ကျွန်တော် ငပလီလူရည်ချွန် အပန်းဖြေစခန်းကို သွား ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒုတိယနှစ် သိပ္ပံ တန်းအောင်မြင်ပြီးတော့ မန္တလေး တက္ကသိုလ်မှာ တတိယနှစ်နဲ့ စတုတ္ထနှစ် သိပ္ပံတန်းတွေကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၆-၆၇ နဲ့ ၁၉၆၇-၆၈ ပညာသင်နှစ်တွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာကြီး ရရှိခဲ့တဲ့ ဘွဲ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိလိုပါတယ်ရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော် BSc(Physics) ဘွဲ့ ကို
မန္တလေးတက္ကသိုလ်က ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရရဲ့ ပညာသင်အဖြစ် ကျွန်တော် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဆာရေးတက္ကသိုလ် (University of Surrey)မှာ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၉ ခုနှစ်အထိ ခြောက် နှစ်ခန့် ဘွဲ့လွန်ပညာများ ဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ Colombo Plan အစီအစဉ်အရ British Council ရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ့ သွားခဲ့ တာဖြစ်ပါ တယ်။ ကျွန်တော် အဲဒီတက္ကသိုလ်က ၁၉၇၄ ခုနှစ်မှာ MSc(Spectroscopy)ဘွဲ့နဲ့ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှာ PhD(Molecular Spectro-scopy) ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်ကပေးတဲ့ Diploma in Education Management (DEM)ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ ရရှိပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာကြီး ဘယ်တက္ကသိုလ်တွေ
မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါသလဲဆိုတာနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ချိန်တွေကိုလည်း ပြောပြ ပေးပါဦးရှင့်။
ဖြေ ။ ။ မကွေးဥပစာကောလိပ် ရူပဗေဒ
ဌာနမှာ ၁၉၆၉ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက် နေ့ကစပြီး သရုပ်ပြဆရာအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဘဝတစ်လျှောက်လုံး မကွေးတက္ကသိုလ်နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တို့မှာပဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မကွေး တက္ကသိုလ်မှာ သရုပ်ပြနဲ့ ကထိကအဖြစ် ခြောက်နှစ်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်မှာ သရုပ်ပြမှ ပါမောက္ခအထိ ရာထူး အဆင့်ဆင့် ၂၂ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တာဝန်ခံ
ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ဘယ်အချိန် မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါလဲရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ
ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်တာဝန်ကို ၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၉ အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြားထဲ တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၈ အထိ နှစ်နှစ်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မေလထဲမှာ အငြိမ်းစားယူရမှာပါ။ ပညာရေး ဝန်ကြီးက တာဝန်ပေးလို့ အငြိမ်း စားမယူရဘဲ ကျွန်တော် တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ် အဖြစ် ၂၀၀၆ မှ ၂၀၀၈ အထိ နှစ်နှစ်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပါ။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ရာထူးနဲ့ အငြိမ်းစားယူခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ တာဝန်ယူ
စဉ်အချိန်က အမှတ်တရဖြစ်စဉ် များရှိရင် ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ ။ ။ ကျွန်တော့်အတွက် ထူးခြားမှုရှိတဲ့
ဖြစ်စဉ်တွေကို အမှတ်တရဖြစ်စဉ် များအဖြစ် ပြောပြပါမယ်။ ပထမဖြစ်စဉ် ကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ သမ္မတကြီး H.E. Dr. A.P.J Abdul Kalam မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ် မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများက အိန္ဒိယနိုင်ငံသမ္မတကြီးကို ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ရဲ့ အထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမမှာ ကြိုဆိုဧည့်ခံပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိ တက္ကသိုလ်များမှ ဆရာ ဆရာမများနဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားအချို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကြီးက ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဟောပြောပွဲအပြီးမှာ သမ္မတကြီးက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို သိပ္ပံနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင် ရာစာအုပ်များ လက်ဆောင် ပေးပါတယ်။ တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ် ကျွန်တော်က စာအုပ်များကို လက်ခံယူခဲ့ပါတယ်။ (သမ္မတကြီးကတော့ ၂၇-၇-၂၀၁၅ နေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။)
ဒုတိယဖြစ်စဉ်ကတော့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကို လာရောက်ပညာသင်ယူတဲ့ နိုင်ငံခြားကျောင်းသူတစ်ဦးကို ပါရဂူဘွဲ့ အပ်နှင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းသူ ဟာ တရုတ်နိုင်ငံက ကျောင်းသူ မစ္စရှီရင်း (Ms.Shi Yin)(ခေါ်) မယဉ်ယဉ်မေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက် နေ့က ကျင်းပတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရဲ့ (၁၁၂) ကြိမ်မြောက် ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားမှာ တာဝန်ခံပါမောက္ခချုပ် ကျွန်တော်က မစ္စရှီရင်း (Ms.Shi Yin) (ခေါ်) မယဉ်ယဉ်မေကို သမိုင်းဘာသာရပ်မှာ ပါရဂူဘွဲ့အပ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ မယဉ်ယဉ်မေ ဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က အပ်နှင်းသော ပါရဂူဘွဲ့ကို လက်ခံရယူခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံခြားကျောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမိုင်းဌာနမှာ ၂၀၀၃ မှ စတင်ပြီး ပါရဂူဘွဲ့အတွက် သုတေသနများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာရှီရင်း တင်သွင်း တဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ယူသုတေသနကျမ်း ခေါင်းစဉ် မှာ “တရုတ်-မြန်မာယဉ်ကျေးမှု ဆက်ဆံရေး (၁၉၅၀-၂၀၀၆)” ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပါရဂူဘွဲ့ကျမ်း ကြီးကြပ်သူများကတော့ ဆရာကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်မောင် ညွန့်နဲ့ ဆရာမကြီး ပါမောက္ခဒေါက်တာ မာဂရက်ဝေါင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနမှာ သုတေသန ကျောင်းသူမဖြစ်မီ ဒေါက်တာရှီရင်းဟာ ပေကျင်းတက္ကသိုလ်ကနေ မြန်မာစာနဲ့ ဘွဲ့ ရရှိပြီး ယူနန်နော်မယ် တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်း ဘာသာရပ်နဲ့ မဟာဘွဲ့ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါ တယ်။
တတိယဖြစ်စဉ်ကတော့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်၊ ၃ ရက်နေ့များမှာ တိုက်ခတ် ခဲ့တဲ့ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ အပျက်အစီးတွေရှိတဲ့ အကြောင်းပါပဲ။ ဘွဲ့နှင်းသဘင်၊ စာသင် ဆောင်များ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများရဲ့ ခေါင်မိုး တွေနဲ့ အကာအရံတွေ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါ တယ်။ သက်တမ်းရင့်ကျွန်းပင်ကြီးတွေ၊ သစ်တိုပင်ကြီးတွေ အပါအဝင် သစ်ပင် အရွယ်စုံ၊ အမျိုးစုံ ၂၀၀ ကျော် ပြိုလဲပါတယ်။ အဓိပတိဂိတ်အနီး ယူနီယံကွင်းထဲက တစ်ပင်တည်းသာရှိသော ရှားပါးအပင်ဖြစ်တဲ့ ကညင်ဖြူပင်ကြီးပါ ပြိုလဲပါတယ်။ အလွန်နှမြောမိပါတယ်။ လမ်းဘေးက သစ်ပင်ကြီး၊ သစ်ပင်ငယ်အမျိုးစုံ လမ်းပေါ် ကို ပြိုလဲကျလို့ အဓိပတိလမ်းကြီး ပိတ်သွား ပါတယ်။ ကျောင်းထဲက ဝန်ထမ်းများ နေ့ရော၊ ညပါ ကြိုးစားရှင်းလင်းလို့ မုန်တိုင်း စဲပြီး တစ်ပတ်လောက်အကြာမှာ လမ်းပွင့် သွားပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ အများကြီးရှိ တဲ့ကြားထဲက တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအဖြေ စာအုပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဆရာ ဆရာမများက အချိန်မီပြီးစီးအောင် စစ်ဆေး ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မုန်တိုင်းပြင်းထန်ပေမယ့် သစ်ပုပ်ပင်ကြီး ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါဟာ အဆိုး ထဲက အကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက သစ်ပုပ်ပင်ကြီးရဲ့ အခြေအနေကို သိချင်လို့ လာကြည့်တဲ့လူတွေ အများကြီးပါပဲ။ တစ်လ လောက်ကြာတဲ့အထိ တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ လာ ကြည့်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ သစ်ပုပ်ပင်ကြီး အကောင်းပကတိရှိတာကို တွေ့ရလို့ လာကြည့် တဲ့ လူတိုင်းဟာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့လို ကြည်နူးမိပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နဲ့ ပတ်သက်ဖူးသူတိုင်း၊ အဓိပတိလမ်းကို လျှောက်ဖူးသူတိုင်း သစ်ပုပ်ပင်ကြီးကို သံယောဇဉ်ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီထူးခြားဖြစ်စဉ် သုံးခုကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စဉ်တွေပါပဲ။
မေး ။ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ရာပြည့်
သဘင်အတွက် အမှတ်တရစကား ပြောကြားပေးပါရှင့်။
ဖြေ ။ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ကံ့ကော်
တောလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြသလို တက္ကသီလာ မြကျွန်းသာလို့လည်း အမြတ် တနိုး ခေါ်ကြတယ်။ ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားပြီး အမိနိုင်ငံအတွက် ထူးချွန် ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ မွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါ တယ်။ လူသားတို့ရဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဆင့်မြင့်ပညာ များကို အစဉ်မပြတ်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တဲ့ အထင် ကရ ပညာ့ဗိမာန်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ နှစ် ၁၀၀ ပြည့်ပါပြီ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရာပြည့်သဘင် ဂုဏ်ပြုကျင်းပရေးကော်မတီအသီးသီးကလည်း စာပေ၊ ဂီတ၊ အနုပညာ စသည့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် အကောင်း ဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ် ၁၀၀ ပြည့် ရာပြည့်သဘင် အထိမ်းအမှတ် ဂုဏ်ပြု ဖျော်ဖြေပွဲအနေနဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ မြဝတီရုပ်မြင်သံကြားက တက္ကသိုလ်ရနံ့တွေ သင်းနေတဲ့ တေးသီချင်းတွေ ထုတ်လွှင့်ပေးပါ တယ်။ အငြိမ့််ပွဲများနဲ့လည်း ဖျော်ဖြေပါတယ်။ နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာများကလည်း တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာ တွေကို ဆောင်းပါးများ၊ အင်တာဗျူးများနဲ့ ဝေဝေဆာဆာဖော်ပြပြီး ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ဂုဏ်ပြုသဘင်ပွဲအတွက် စီစဉ်သူများ၊ စာပေ ပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ဂီတပညာရှင် များ၊ ရုပ်မြင်သံကြားဌာနများမှ စီစဉ်ရိုက်ကူး ထုတ်လွှင့်သူများနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက် သူအားလုံးကို တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ ကိုယ်စား ကျွန်တော် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့ ပတ်သက် ဖူးသူတိုင်းလည်း အတိတ်ကအိပ်မက်များနဲ့ လွမ်းတသသဖြစ်မယ်၊ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကပ် ဘေးကြောင့် လူအများ ပါဝင်ခွင့်မရပေမယ့့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်သဘင် ဂုဏ်ပြုပွဲ ကို ကဏ္ဍအလိုက် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြလို့ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပီတိ ဖြစ်မိပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး ။ ။ ဆရာကြီး အခြားဖြည့်စွက်ပြော
ကြားလိုတာများရှိရင်လည်း ပြော ကြားစေလိုပါတယ်။
ဖြေ ။ ။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးဟာ ကမ္ဘာ့
အဆင့်မီတက္ကသိုလ် မဖြစ်သေးပါ ဘူး။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံဘာသာရပ်အချို့မှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းအချို့ဟာ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီသုတေသနတွေကရရှိတဲ့ တွေ့ရှိချက် များကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သုတေသန ဂျာနယ်တွေမှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးလို့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီတယ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါ တယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ရပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ထူးချွန်ပညာရှင်တွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာအနေ နဲ့ ပြောရရင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ရူပဗေဒ ဘာသာနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ကြတဲ့ ဒေါက်တာ ပဒေသာတင်က အမေရိကန်နိုင်ငံ အမျိုးသားလေကြောင်းနဲ့ အာကာသ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့(နာဆာ)မှာ သုတေသန ပညာရှင်၊ ဒေါက်တာ ခင်မောင်မောင်က University of Southern Mississippi မှာ ရူပဗေဒပါမောက္ခ ၊ ဒေါက်တာစောဝေလှ က Ohio University မှာ ရူပဗေဒပါမောက္ခ အသီးသီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ ထူးချွန်သူများ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့ဂုဏ် ဆောင်တဲ့ အဲဒီပညာရှင်တွေကို ကျွန်တော် ဂုဏ်ယူချီးကျူးပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘာသာရပ်အသီးသီးက ဆရာ ဆရာမများ ကလည်း နိုင်ငံအကျိုးပြုသုတေသနများနဲ့ ဘာသာရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သုတေသနများ ယခုထက်ပိုပြီး ဆောင်ရွက် ကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံတိုက်တွန်းပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီး ရှေ့ ဆက်နှစ်ပေါင်းများစွာ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့ ပါစေ၊ နိုင်ငံအကျိုးကို သယ်ပိုးနိုင်မယ့် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အသိပညာရှင်များ၊ အတတ် ပညာရှင်များ ဆက်လက်မွေးထုတ် ပေးနိုင်ပါစေ၊ ပညာပန်းတွေ အရောင်စုံ အောင်၊ ရနံ့စုံအောင် ဖူးပွင့်ပေးနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ တက္ကသိုလ်ကြီး မကြာမီ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက် ပါတယ်။
- ညောင်ဦးမြို့နယ် သဲပြင်တော ရွာ၊ အဖဦးကံသာ၊ အမိ ဒေါ်စာ တင်တို့က ၁၉၄၆ ခုနှစ် မေလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားသည်။
- အခြေခံပညာကို သဲပြင်တောရွာ၊ မူလတန်းကျောင်းနှင့် ညောင်ဦး မြို့၊ အထက်တန်းကျောင်းတွင် သင်ယူသည်။
- အဆင့်မြင့်ပညာကို မကွေး ဥပစာကောလိပ် (ယခုမကွေး တက္ကသိုလ်)နှင့် မန္တလေး တက္ကသိုလ်တို့တွင် ရူပဗေဒ အဓိကဖြင့် ပညာသင်ယူခဲ့သည်။
- ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး တက္ကသိုလ်မှ BSc(Physics)ဘွဲ့ရရှိသည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဆာရေးတက္ကသိုလ်မှ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် MSc(Spectroscopy) ဘွဲ့နှင့် ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် PhD (Molecular Spectroscopy)ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
- ၁၉၆၉ ခုနှစ် မေလ ၂ ရက်တွင် မကွေးဥပစာကောလိပ် ရူပဗေဒ ဌာနတွင် သရုပ်ပြဆရာအဖြစ် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည်။
- မကွေးတက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်တို့တွင် သရုပ်ပြမှ ပါမောက္ခအထိ ရာထူးအဆင့် ဆင့် ၂၈ နှစ်ကြာ တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် များ သိပ္ပံဌာနတွင် ဌာနမှူး အဖြစ် ခြောက်နှစ် တွဲဖက် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
- MSc(Physics) ဘွဲ့အတွက် သုတေသနကျမ်း ၁၁၃ ခုနှင့် PhD(Physics)ဘွဲ့အတွက် သုတေသနကျမ်း ၄၇ ခုကို ကျမ်း ကြီးကြပ်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ Ph. D(Physics)ဘွဲ့ အတွက် နှုတ်မေးစာမေးပွဲ ၅၁ ခုတွင် ပြင်ပစာစစ်သူ (External Examiner)အဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။
- အခြေခံပညာ တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းအဆင့် အစိုးရပြဋ္ဌာန်း စာအုပ် Physics နှင့် တက္ကသိုလ် အဆင့် ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ် လေးအုပ် ပြုစုခဲ့သည်။
- ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ခံ ပါမောက္ခချုပ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ် ရာထူးဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။